ဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကကျရှုံးနေတာလဲ Martech Zone
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 8, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
နောက်ဆုံး ဒီဇင်ဘာလငါရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းပျက်ကွက်သည်အဘယ်ကြောင့်တခုတခုအပေါ်မှာ entry ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ငါဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲငါရေးသင့်တာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့, ဒီမှာ entry ကို၏နောက်ဆက်တွဲပါပဲ။ ဒီညကလေးတွေနဲ့ငါသွားတွေ့တယ် ကာရစ်ဘီယံ၏ပင်လယ်ဓားပြDead Man's Chest သူတို့ကအဲဒါကိုကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ဓားပြတွေ၊ ငါတို့နို့ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များစွာကိုတတ်နိုင်သမျှနင့်အဖြစ်ခေါ်သင့်တယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်သက်ရောက်မှုများသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်သည်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လူတိုင်းအတွက်မဖျက်ဆီးဘဲအဆုံးသတ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် တိုင်း လာမယ့်ရုပ်ရှင်ဖွင့်တံခါးကို။ အတိုချုပ်ဆိုရသော်ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင်၏မိနစ် ၁၆၀ ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်အောင်ကြည့်ခဲ့သည်။ အဆုံးမရှိ! တစ်ယောက်မဟုတ် ငါအဆုံးမှာချစ်စရာသေးငယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ခရက်ဒစ်မှတဆင့်ထိုင်ခြင်းနှင့်ကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့သည်။ (နည်းပညာပိုင်းအရထိုမြေကွက်၏အခြားအပိုင်းကိုအသုံးမပြုပဲထားခဲ့သည်)
ဝမ်းနည်းပါတယ်ဒစ္စနေး! မင်းမှုတ်လိုက်တယ် ဗီဒီယိုမှာ Pirates Part III ကိုစောင့်နေမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တကယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်
ဒီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူအဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း ဆင်တူချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Pat Coyle နှင့်သူ၏ဘလော့တွင်ကြော်ငြာခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြောဆိုမှုများနှင့်ဆင်တူသည်။ ပက်ကဤသို့ပြောပြသည် -“ ဒီလူတွေဟာသူတို့ကြားချင်တာကိုပြောဖို့၊ သူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုယာယီကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရဖို့လဲလှယ်ဖို့အဲဒီပုံပြင်တွေကိုသုံးနိုင်တယ်။ ဒါကငါလုပ်ချင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး။
ရုပ်ရှင်များသည်ဤနည်းဥပဒေမှချွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုယာယီပြည့်စုံသောခံစားချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပေးဆပ်နေကြသည်။ သို့သော်ပြည့်စုံခြင်းဟူသောစကားလုံးသည်နိဂုံးချုပ်သို့မဟုတ်အဆုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယာယီကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားချက်တောင်သင်မရရှိပါကမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင်ရည်မှန်းချက်မှာစားသုံးသူအားလှည့်ဖြားရန်နှင့်၎င်းတို့၏ငွေများကိုသာရရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေသောအရာ။ ရုပ်ရှင်၏ရည်မှန်းချက်သည်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ယူရန်ထက်ငွေရှာရန်မျှသာမဟုတ်ပါ၊ ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်ကိုမပြည့်စုံစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ငွေပိုမိုသုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်။ လာမယ့် ရုပ်ရှင်!
အရင်တုန်းကရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရေးတာ၊ ယခုတွင်၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းလုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနုပညာကိုအာရုံမစိုက်တော့ဘဲကြော်ငြာနှင့်ရုပ်ရှင်များ၏ပေါင်းစည်းမှုကြောင့်မျိုသိပ်သွားသည်။ အနည်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကြော်ငြာအများစုတွင်ငွေပြန်ပေးရန်အာမခံရှိသည်။ ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ငါပိုက်ဆံပေးရတာသိပ်နောက်ကျသွားပြီ။
စက်တင်ဘာ 4, 2006 မှာ 9: 34 AM
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါပင်လယ်ဓားပြတွေကိုတကယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ခံရမယ်။ ထိုအ thourougly ကပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ငါ့အတွက်၊ ပင်လယ်ဓားပြတွေဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။ ဒါဟာပိုပြီးဖြစ်မဆိုလိုပါ။ နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်အဖြစ်ငါကတောက်ပရှာပါ။